Gay Gay News - eGay Shop
Taariikhda, Faallooyinka iyo fikradaha ka yimid dunida khaniisiinta ah waxay keeneen farahaaga. La wadaag oo ku xiro bulsho ahaan.
Gabdhaha qaarkood waxay jecel yihiin Egay!
Waxaa daabacay wadaadada EthnoUniverse
Rare waxay ku guuleysatey doorka Kenya
Waxaa daabacay wada-shaqeeye GTranslate
Afrika maaha meesha ugu qadar badan ee caalamka ku yaala si aan caan u aheyn. Cadaadiska waa mid caadi ah oo ku filan wuxuuna ku jiri karaa "baaritaan caafimaad." In wax guul ah bulshada LGBTQ ah, maxkamad Kenya xukuntay in imtixaanada dabada khasabka tahay sharci darro. Garsoorayaasha ayaa yiri "hoosaysiiyo codsadayaasha si baaritaanka futada xadgudbay xuquuqda Dacwoodayaal 'hoos Articles 25, 27, 28 iyo 29 dastuurka" iyo "isticmaalka cadaymaha helay baaritaanka futada ee codsadayaasha ee dhagaysiga maxkamadda iyaga ka gees ah ku xadgudba xuquuqda ay u leeyihiin ka yar 50 article ee dastuurka. "" xukunka waa tallaabo wayn ma aha oo kaliya in ku hayaa sharafta khaniisiinta kii lahaa la kulantay ee sharafta ummadda ee baaritaanka futada, laakiin sidoo kale in ay xukunka ...
Xerooyinka qadada ayaa dib ugu soo noqda Yurub, gaas.
Dibad-baxyada Yurubta Galbeed, gaar ahaan UK iyo Ruushku, waxay soo bandhigeen feejignaan culus. Dibad-baxyada Maraykanka ayaa ah mid aan macquul ahayn. Qaar ka mid ah odayaasha maraykanka ayaa riixaya ficil diblomaasiyadeed.
Sidoo kale Ben de la Creme dhab ahaantii guriga ayuu tagaa todobaadkan?
Ben ama "De La" oo inta badan la yiraahdo, waxay si rasmi ah u cambaareyneysaa tartanka loogu jiro tartanka tartan ee Rupaul's Dragon Allstars 3 oo aan muujin wax calaamad ah, sidaasi darteed sababta ay u sheegtay inay u direyso guriga isbuucaan halkii ay codeyn lahayd ka baxsan tartanka?
Waxaa qoray Jonathan Rigby